नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने चम्किएपछि…. | NepalDut
नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने चम्किएपछि….
ग्लोबल टि-२० लिग अन्तर्गत इलिमीनेटर खेलमा विन्नीपेग बिरुद्ध खेल्ने क्रममा नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछानेले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। सोमपाल कामिलाई भने टिमले अन्तिम-११ मा मौका दिएन।
जारी खेलमा पहिले ब्याटिंग गर्दै टोरोन्टोले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २३८ रन बनाएको थियो। हेनरिच क्लासेनले ४९ बलमा ११ चौका र ५ छक्का मदतले अविजित १०६ रन बनाएका थिए भने रोडरिगो थोमसले ७३ रन ( ४० बलमा ७ चौका र ५ छक्का ) बनाए।
लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विन्नीपेगलाई जितसम्म पुग्न नदिन सन्दिप लामिछानेले राम्रो कमब्याक गर्दै २ विकेट लिएका छन्। ४ ओभर बलिंग गर्ने क्रममा सन्दिपले ३४ रन खर्चेर २ विकेट लिएका हुन्।
सन्दिपले पहिलो खेलमा ब्राम्पटन बिरुद्ध ४४ रन खर्चेर १ विकेट, दोश्रो खेलमा मोन्टरियल टाइगर्स बिरुद्ध २८ रन खर्चेर १ विकेट तथा तेश्रो खेलमा मोन्टरियल बिरुद्धनै २५ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए।
सन्दिपको पहिलो ओभर – १३ रन , १ विकेट ( विकेट , ४ १ ४ ४ ० )
खेलको तेश्रो ओभरमै बलिंग गर्न आएका सन्दिपले ओभरको पहिलो बलमै उमर अकमलको ठुलो विकेट लिए। पाकिस्तान क्रिकेटर अकमल ठुलो सट खेल्ने चक्करमा अघि बढ्दै गर्दा सन्दिपको लेग स्पिनमा स्टम्प आउट हुन् पुगे। त्यसपछि भने सन्दिपलाई जेपी डुमिनिले १ चौका र क्रिस लिनले २ चौका प्रहार गरे।
सन्दिपको दोश्रो ओभर – ८ रन ( ० १ १ १ ४ १ )
पावरप्लेमा पहिलो ओभर गरे पछि सन्दिप दोश्रो ओभर गर्न आठौँ ओभरमा आए। ओभरको पाँचौ बलमा डुमिनीले सन्दिपको लो-फुल टसलाई डिप मिड विकेटमा चौका प्रहार गरे। अन्य बलमा भने सन्दिपलाई बाउन्ड्री प्रहार गर्न सकेनन्।
सन्दिपको तेश्रो ओभर – ९ रन ( ० १ १ ० १ ६ )
ओभरको पहिलो ५ बलमा बाँधेर राखे पनि सन्दिपलाई अन्तिम बलमा डुमिनिले एक्स्ट्रा कभर माथि छक्का हिर्काए।
सन्दिपको चौथो ओभर – ४ रन , १ विकेट ( ० २ ० विकेट १ १ )
चौथो ओभरमा स्पेलकै उत्कृस्ट गर्ने क्रममा सन्दिपले सन्नी सोहाललाई ओभरको चौथो बलमा क्रिस ग्रिनबाट लंग अफमा क्याच आउट गराए। स्लग स्विप गर्ने क्रममा सोहल ३६ रन बनाएर सन्दिपको दोश्रो शिकार बने। ओभरमा सन्दिपले सबैभन्दा किफायती बलिंग गर्दै मात्र ४ रन खर्चिए।
४ ओभर बलिंग गर्दा सन्दिपले ३४ रन खर्चेर २ विकेट लिए। यस क्रममा २ उमर अकमल र सन्नी सोहलको विकेट लिंदा सन्दिपको बलमा १ छक्का र ४ चौका प्रहार भयो। ठुलो योगफलको खेलमा सन्दिपको बलिंग राम्रो रह्यो।
आज टोरोन्टो र विन्नीपेग बीच जित्ने टिमले भोलि फाइनल प्रवेशको लागि भानकुभर नाइट्स बिरुद्ध खेल्नेछ। पहिलो क्वालीफायरमा भानकुभर ब्राम्पटन वुल्भ्ससंग ७७ रनले ( डीएल ) पराजित भएको हो।